👍ဒဂုံမြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1750) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် 👍 👍လမ်းလည်းကျယ်တယ်နော်👍 👏#ဖွဲစည်းပုံများ# 👉 2Master bedrooms 👉 1Single ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 အောင်မြေသာစံမြို့နယ် 🍀 ✍🏼 S ( 216 ) 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း / အငှား 👈 မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 🛣 ( 65 ) လမ်းပေါ်တင် ➡️ ( 22 x 24 ) ကြား ⛲️ မန္တလေး ကျုံးအနီး 🚸 ကျောင်းအနီး 💁‍♀️ ဈေးအနီး 🔹 Master Room ( 1 ) ခန်း , Single ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 မဟာအောင်မြေမြို့နယ် 🍀 S ( 300 ) 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🛣 ( 35 ) လမ်း အနီး ➡️ ( 80 x 81 ) ကြား 💁‍♀️ ဈေးအနီး 🚸 ကျောင်းအနီး 🔹 Master Room (4) ခန်း , Single Room (3) ခန်းပါ 📏ပေ ( 31 x 90 ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် 🍀✍🏼 S ( 1167 ) 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 ➡️ ( ဗန္ဓုလ x အေးသုခ ) ကြား 📏 ပေ ( 30 x 40 ) , အနောက်လှည့် , မူရင်းစလစ် ✅ ဈေးတန်သော နေချင်စဖွယ် 💸 သိန်း ( 800 ) တန် 🏠 နံကပ် ...
👍ကမာရွတ်မြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1400) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ပြင်ဆင်ပြီး အဆင့်မြင့် Luxury Condo ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 🏡🏡 👉 1Sqft ကို 3သိန်း5သောင်း ၀န်းကျင်ပဲ ခေါ်ထားပါတယ် 👍 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် ...
🙏🏻 မင်္ဂလာပါရှင် 🙏🏻 🍀 ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် 🍀 ✍🏼 R ( 423 ) 🛣 ( 35 ) လမ်း အနီး 🏠 အိမ် 👉 အရောင်း/အငှား 👈လေး မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် 🤗 ➡️ ( 73 x 74 ) ကြား 📏 ပေ ( 30 x 60 ) , မြောက်လှည့် 💸 အရောင်း - သိန်း ( 5500 ) / အငှား - သိန်း ...
စမ်းချောင်းသီးသန့် မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ),ပထမထပ်,၃လွှာ,၄လွှာ နှင့် ၅လွှာအထိ တတိုက်လုံးဌားရန် ရှိပါသည်...
စမ်းချောင်းသီးသန့် မြေညီ(ထပ်ခိုးပါ),ပထမထပ်,၃လွှာ,၄လွှာ နှင့် ၅လွှာအထိ တတိုက်လုံးဌားရန် ရှိပါသည်... စမ်းချောင်းမြို့နယ်..ကျွန်းတောလမ်းမပေါ် အကျယ်ဝန်း...၂၅ပေ. ၅၀ပေ. Hall...Lift...ရေချိုးခန်း..အိမ်သာကြွေပြားခင်း/ကပ် အလွှာ ...
👍သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှ ဝယ်ချင်သူများအတွက်👍 🏡🏡Sqft(1700) ကျယ်ဝန်းပြီး အိပ်ခန်း 3ခန်းပါ ကွန်ဒိုလေး ရောင်းပေးပါ့မယ်။ 1Sqft ကို9သောင်းခွဲပဲခေါ်ထားပါတယ်ရှင့် 🏡🏡 👍နေရာကောင်း လူစည်တဲ့ နေရာလေးပါနော် ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-sale?keyword=%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9,%20%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%20(Lanmadaw,%20Yangon)&page=3